How'd it happen and more reports?: ရောက်စလူမှ ဧည့်ခံမထားလျှင် နောက်ကျသူက လှည့်ပြန်သွားမည်
ရောက်စလူမှ ဧည့်ခံမထားလျှင် နောက်ကျသူက လှည့်ပြန်သွားမည်
ဆောင်းပါးရှင် - ရီနေနိုင်
နှစ်ပေါင်းများစွာ ပြင်ပနဲ့ဆက်ဆံရေးတံခါး ကို ကြပ်ကြပ်ပိတ်ထားခဲ့ပြီး တံခါး မင်းတုန်း ရော မျောက်လက်ပါ သံချေးကိုက်လောက် အောင် ထားခဲ့တဲ့နိုင်ငံမျိုး မှာ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံ ရောင်းဝယ်ရေးကို ပြန်ဖွင့်လှစ်ပြီး ပြင်ပက ဧည့်တွေကို လာပါ၊ ဝင်ပါ၊ လေ့လာပါ၊ ရောင်းပါ၊ ဝယ်ပါ ဆိုတာမျိုး၊ ယုံကြည်မှုတွေ သဒ္ဒါ ဆင့်ပြီး ကုမ္ပဏီတစ်ခုတစ်လေ လာဖွင့်ပါခင်ဗျ ဆိုသဟာမျိုး ပြောရ ဆိုရ ဆွေးနွေး ဖိတ်ခေါ်ရတာဖြင့် သိပ်လွယ်တဲ့အ လုပ်တော့ မဟုတ်မှာသေချာ ပါတယ်။ ငါးနှစ် လောက် မဖွင့်ပဲထားတဲ့ ကိုယ့်အိမ်နောက်ဖေး တံခါးတောင် ဘယ်မှာ လွယ်လွယ်ဖွင့်လို့ရမှာ လဲ။ ဇွတ်ဆွဲဖွင့်လိုက်ရင် တံခါးကျည်းဘောင် ပါ ပြိုကျပြီး နောက်ဖေးဟောင်းလောင်းဖြစ်သွားနိုင်သလို သံချေးကိုက်နေ တဲ့ သော့တို့ မင်းတုန်းတို့ကို ချေးချွတ်ပြီး ပုံမှန်ပြန်ပွင့်အောင်ရမ်းလုပ်ဖို့လည်း ဘယ်လိုမှဖြစ်မှာမဟုတ် ဘူး။ ဒီတော့ ငါးနှစ် အိမ်တံခါးတောင် မလွယ် ရင် နှစ်ငါးဆယ် ပိတ်ထားတဲ့ တိုင်းပြည်တံခါး ဖွင့်ရတာက နှစ်ပေါင်းများစွာ မဝတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပုဆိုးကို စင်မြင့်ပေါ်မှာ ပြန်ဝတ်ရသလိုမျိုး အရမ်းကြီးခက်နေမှာ စာနာမိပါတယ်ဗျာ။
ဒီလို တံခါးပိတ်ထားတဲ့ နိုင်ငံများ ပြင်ပ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကို ဖိတ်ခေါ်တံခါး ဖွင့်တဲ့ အခါမှာ ကျူးလွန်တတ်တဲ့ အမှားကြီးနှစ်ခု ရှိတတ်တယ် ဆိုတာ နိုင်ငံတကာ ဥပမာများမှာ မြင်ရ တတ်ပါတယ်။ တစ်ခုကတော့ ဧည့်သည် မလာ အောင် နှစ်ပေါင်းများစွာ တံခါးပိတ်ထားခဲ့ရာ ကနေ ဧည့်သည် လာအောင် ဖိတ်မယ်လည်း ဆိုရော ဧည့်သည်မလာမှာ စိုးပြီး အခွင့်အရေး တွေ မတရားပေးပြီး ဖိတ်ခေါ်မိတတ်ပါတယ်။ အဲဒီလို ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရင် ကိုယ့်အထဲက မိသားစုဝင် တွေ ဘယ်လိုနစ်နာမလဲ၊ အနေခက် အစားခက်ဖြစ်သွားမလဲ မစဉ်းစားပဲ ဖိတ်မိ တာမျိုးပေါ့။ တနည်းအားဖြင့်တော့ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ဖိတ်ခေါ်ရာမှာ ကိုယ့်တိုင်းရင်း သားလုပ်ငန်းရှင်ကလေးများ ဘယ်လိုနစ်နာ သွားမလဲ၊ သူတို့ အနေနဲ့ အင်အားကြီးတဲ့ ပြည်ပ လုပ်ငန်းကြီးတွေ ကို ဈေးကွက် ယှဉ်ပြိုင် ဖို့ ခက်ခဲမှာဖြစ်ပြီး သူတို့တွေပြိုလဲ ဇာတ် သိမ်းသွားမလား။ သူတို့ကို ဘယ်လို အကာအ ကွယ် ပေးသင့်သလဲ။ သူတို့ကို မထိခိုက်အောင် ပြည်ပ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူတွေကို ဘယ်လိုအကန့် အသတ်တွေ ချမှတ်ရမလဲ။ ဒါမှမဟုတ် ပြည်ပ လုပ်ငန်းရှင်များရဲ့ ခေတ်မီ နည်းပညာတွေ ကို ပြည်တွင်း လုပ်ငန်းငယ်ကလေးများ ရရှိခံစား နိုင်အောင် လုပ်ငန်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက် တဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေ ဘယ်လို ဖန်တီးပေး သင့်fသလဲ စတာတွေကိုစဉ်းစားပြီး လုပ်ဆောင် ဖို့ လိုအပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အလားတူပဲ ပြည်သူဘဏ္ဍာနဲ့ တည် ထောင်လည်ပတ်နေတဲ့ နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေအနေနဲ့လည်း နိုင်ငံခြားလုပ် ငန်းကြီးတွေနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ရာမှာ အရှုံးနဲ့ရင်မဆိုင် ရအောင် ဘယ်လိုဗျူဟာများ ချမှတ်ဆောင် ရွက်မလဲ၊ ဘယ်လိုအကာအကွယ်တွေပေးဖို့ အစိုးရက စီစဉ်မလဲ၊ ဒါမှမဟုတ် သူတို့နဲ့ အကျိုးတူ ဘယ်လိုပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မလဲ ဆိုတာတွေကို ကြိုတင်စဉ်းစားပြီးမှ ပြည်ပ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကို နေရာချထားပေးရမှာဖြစ်ပါ တယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင် ဧည့်သည်ကို နေ ရာပေးရင်းပေးရင်းနဲ့ မိသားစုဝင်တွေ အိမ် ရှင်တွေ ဘယ်မှာနေရထိုင်ရမှန်းမသိ ဖြစ်နိုင် ပါတယ်။
ဒါကတော့ အစွန်းတစ်ဖက်က အမှားဖြစ် ပြီး အခြားတစ်ဖက်စွန်းရောက် အမှားတစ်မျိုး လည်း ရှိတတ်ပါသေး တယ်။ အဲဒါကတော့ ပြည်ပရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကို ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တဲ့တိုင် နှစ်ပေါင်းများစွာ အကျင့်စွဲနေခဲ့တဲ့ ဈေးကွက် ကို အသာစီးယူထားပြီး ပြိုင်သူတစ်ကိုယ် တည်းနဲ့ ဗိုလ်စွဲနေကျအဖြစ်ကို မစွန့်လွှတ်နိုင် တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ဧည့်သည်ဆီ က လိုချင်တာရှိလို့ ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တာပေမယ့် ကိုယ့် ဘက်မှ တစ်စွန်းတစမှ ပေးချင်စိတ် မရှိတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သို့မဟုတ် ရင်လည်း လူမြင် ကောင်းရုံ တံခါးဟပြီး ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပေမယ့် တ ကယ်လိုလိုလားလား နေရာမပေးချင်တာမျိုး လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာ အထဲဝင် ရုံမက နေရာယူအထိုင်ကျစဖြစ်နေတဲ့ ဧည့် သည်ခမျာ ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် ချက်ချင်းထ ပြန်လို့ မဖြစ်တာမို့ ထ်ိုင်နေရပေမယ့် စိတ် ကသိကအောက် အတော်ဖြစ်မှာပါ။ ဒီနေရာ မှာ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကို ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပေ မယ့် ပြည်တွင်းဈေးကွက်ထဲ ထိုးဖေါက်ဝင် ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ တစ်သက်လုံး ကိုယ်ပဲဈေးခေါင်း၊ ကိုယ်ပဲ ဈေးရောင်းလုပ် လာတဲ့ မိုနိုပိုလီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမျိုးက ကြည့် မရ နိုင်ပဲ ဖြစ်လာတတ်တာပါ။ ဒီနေရာမှာ အစိုးရပိုင်ပဲခေါ်ခေါ် နိုင်ငံပိုင်ပဲဆိုဆို ပြည်သူ ပိုင်ပဲ သမုတ်ချင်သမုတ် တစ်ကိုယ်တည်း ]ဗိုလ်ကီး}လုပ်လာတဲ့ အဲဒီလို စီးပွားရေးအဖွဲ့ အစည်းက အကျိုးတူစီးပွားရှာဘက် အနေနဲ့ သဘောမထားနိုင်ပဲ အပေါ်စီးကနေညစ်ကွက် တွေ သုံးလာတတ်တယ်ဆိုတာ အဲဒီလို တံခါး ဖွင့်စနိုင်ငံများမှာ ကြုံရတတ်ဆိုပဲ။
ဒီလို အစွန်းရောက်အမှားနှစ်ခုစလုံးဟာ နိုင်ငံစီးပွားတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုကို အထောက်အ ကူမပြုနိုင်ပါဘူး။ ပြည်ပ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများ ကြောင့် ပြည်တွင်းက တိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်း များ ထိခိုက်ပျက်စီးတာမျိုး လုံးဝမဖြစ်စေသင့် သလို ပြည်တွင်းကို ဝင်ရောက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံခွင့်ပြုပြီးကာမှ သူတို့လုပ်ငန်းတွေ ဈေးကွက် တွင်း လွတ်လပ်စွာ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ခွင့်ကို ထိခိုက် စေအောင်၊ နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းများနဲ့ ပခုံးချင်း မယှဉ်သာအောင် အကူအညီမပေးပဲထား တာ၊ ဒါမှမဟုတ် အောက်လမ်းနည်းနဲ့ တိုက် ခိုက်တာ စသည်များ လုပ်တာဟာလည်း မ သင့်တော်ပါဘူး။ အိမ်ကို ဧည့်သည်ဖိတ်ခေါ် လို့ ရောက်လာတဲ့အခါ ဧည့်သည်ကို ကျွေး မွေးဧည့်ခံရမှာပေမယ့် ဧည့်သည်ကျွေးဖို့ရာ ကိုယ့်သားသမီးစားနေတဲ့ ထမင်း ပန်းကန် ထဲက ခွဲကျွေးရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလိုပဲ ထမင်းတစ်ဝိုင်းထဲမှာ အိမ်သားတွေက ကြက် သားဟင်း၊ ဧည့်သည် အတွက်က ချဉ်ပေါင် ဟင်းလို့လည်း ခွဲခြားဧည့်ခံကျွေးမွေးလို့က မသင့်တော်ဘူး မဟုတ်လား။ ဒီသဘောပါပဲ။
တကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်တိုင် ကလည်း နိုင်ငံခြားသားနဲ့ ဝေးဝေးနေခဲ့တာ နှစ်ပေါင်းအတော်ကြာတော့ နိုင်ငံခြားသားကို အလွန်အမင်း အထင်ကြီးတဲ့ ရောဂါရော၊ နိုင်ငံခြားသားဆို မယုံမကြည်သံသယများ တဲ့ရောဂါပါ အနည်းနဲ့ အများ ကိုယ်စီရှိနေ ကြတာပါပဲ။ ဒါကြောင့် ပြည်ပရင်းနှီးမြုပ်နှံသူ များကို ဘယ်လောက်လိုက်လျောမလဲ၊ ဘယ် လောက် ကန့်သတ်မလဲဆိုတာကို ကိုယ့်ဘ၀ ဖြတ်သန်းမှုက ရလာတဲ့အတွေးအမြင်အသိနဲ့ ဆုံးဖြတ်တာထက်စာရင် နိုင်ငံတကာမှာ ဘယ် လိုလုပ်ကြသလဲဆိုတာကို ကြည့်ပြီး ဝေဖန် သုံးသပ် ဆုံးဖြတ်တာက အမှန်နဲ့နီးစပ်မယ် ထင်ပါတယ်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အိုအီးစီဒီ (The Organization for Economic cooperation and Development) အဖွဲ့ကြီးရဲ့ အရှေ့တောင်အာရှ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုမူဝါဒများလေ့လာချက်-၂၀၁၄ ဆိုတဲ့ စာတမ်းမှာ အာဆီ ယံနိုင်ငံတွေထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကလွဲ ရင် ကျန်နိုင်ငံများအားလုံးဟာ ပြည်တွင်းပြည်ပ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူနှစ်မျိုးစလုံးကို တန်းတူ ရည်တူ ဥပဒေအရ အကာအကွယ်ပေးထားကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီးတော့လည်း ပြည်တွင်းနဲ့ ပြည်ပ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများအပေါ် ဥပဒေသီးခြားစီပြဋ္ဌာန်းပြီး ခွဲခြားကိုင်တွယ် တာဟာ အာစီယံနိုင်ငံများတွင်း မြန်မာ တစ် နိုင်ငံသာ ရှိပါတယ်လို့ ဖော်ပြထားပါသေး တယ်။ တကယ်တော့ အခုလိုပြောင်းလဲမှု ဟာလည်း နှစ်တော့အတော် ကြာတတ်ပါ သတဲ့။
ဗီယက်နမ်ကို ဥပမာထားကြည့်မယ်ဆို ရင် အဲဒီလို ခေတ်နောက်ကျတဲ့ ခွဲခြားဆက် ဆံမှုပုံစံကနေ ခေတ်မီတဲ့ တန်းတူညီမျှစွာ ဆက်ဆံတဲ့ပုံစံ၊ တနည်းအားဖြင့် ပြည်တွင်း ပြည်ပ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူနှစ်မျိုးစလုံးကို ကျော သား ရင်သားမခွဲခြားတဲ့ပုံစံနဲ့ ဆက်ဆံခြင်းကို ပြောင်းလဲဖို့ နှစ်နှစ်ဆယ်ခန့် အချိန်ယူခဲ့ရကြောင်း အဲဒီစာတမ်းမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ (သူကိုယ် သူ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံပါလို့ မပြောဘဲ ကွန်မြူ နစ်နိုင်ငံအဖြစ် ဆက်ရပ်နေတဲ့ ဗီယက်နမ်နဲ့ အနှိုင်းခံရ တာကတော့ အမှန်တရားဖြစ်မှာ ပေမယ့် အတော်နာစရာကောင်းတယ် ထင် ပါတယ်ဗျာ)။
တကယ်တော့ ပြည်ပရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများ ကို လက်ခံရာမှာ ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းများကို ကာကွယ်မယ့် ဥပဒေတွေ၊ လုပ်ထုံးတွေ၊ မူဝါဒတွေ ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ပါတယ်။ ပြလည်းပြဋ္ဌာန်း သင့်ပါတယ်။ ဒါကတစ်ပိုင်းပါ။ အဲဒါတွေကို လက်ခံကျေနပ်လို့ အဲဒီမူဘောင်ထဲမှာပဲ ကျွန် တော်တို့ဆီမှာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံလုပ်ကိုင်ချင်ပါတယ်ဆိုပြီး ဝင်လာတဲ့ ပြည်ပ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူ ကိုတော့ ပြည်တွင်းက ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများ နည်းတူ အခွင့်အရေးပေးပြီး လုပ်ကိုင်စေရမယ် လို့ ဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူ့သဘာဝအရ တွေးကြည့်ရင် ဧည့်သည်က ဧည့်သည်ပဲဖြစ် တာမို့ အိမ်ရှင်လိုနေလို့ မရနိုင်ဘူး ဆိုတာက မူလကတည်းက သိထားပြီးသား ဖြစ်ပါလိမ့် မယ်။ ဧည့်သည်ရဲ့တောင်းဆိုမှုမှာလည်း အ ကန့်အသတ်တွေ ရှိပါတယ်။ ဘယ်ဧည့်သည် ကမှ ]]ရင်းနှီးချစ်ခင်မှုကို ပြတဲ့အနေနဲ့ လူကြီး မင်းတို့ကုတင်ပေါ်မှာ လူကြီးမင်းတို့ လင်မ ယားနဲ့ အတူအိပ်ပါရစေ}}လို့ တောင်းဆိုမယ် မထင်ပါဘူး။ (တောင်းဆိုတဲ့ ဧည့်သည်ဆိုရင် လည်း ဘယ်အိမ်ရှင်ကမှ အဝင်မခံမှာ မဟုတ် ဘူးလေ)။ ဒီတော့ ဧည့်သည်ကတော့ ဧည့် ခန်းမှာပဲ နေရမှာပဲ။ အိမ်ရှင်နေရာချထားပေးရာ မှာ အိပ်ရမှာပဲ။ အိမ်ရှင်ကျွေးတာကိုပဲ စားရ မှာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ဧည့်ဝတ်ကျေပြွန်မှလည်း ဧည့်သည်ကို လက်ခံ ရကျိုးနပ်ပါလိမ့်မယ်။ သူကိုယ်တိုင် ထပ်လာလည်ဖို့ စိတ်ဝင်စားမှာ ဖြစ်သလို တခြားလူတွေကိုလည်း ဒီအိမ်မှာ ဧည့်သည် လုပ်ရတာဟာ စိတ်ချမ်းသာကြောင်း ပြန်ဝေမျှပြောပြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အသစ်ပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့ နိုင်ငံခြားရင်းနှီး မြုပ်နှံမှုဥပဒေမှာ ဒီဥပဒေအရ ထူထောင်တဲ့ လုပ်ငန်းကို စာချုပ်ချုပ် ဆိုထားတဲ့ သက်တမ်း အတွင်း၊ သို့မဟုတ် ထပ်မံသက်တမ်းတိုးထား တဲ့ကာလအတွင်းမှာ ပြည်သူပ်ိုင်မသိမ်းပါ ဘူးလို့ အာမခံချက်ပေးထားပါတယ်တဲ့။ ဒါပေ မဲ့ ဒီအာမခံချက်ဟာ အရင်အစိုးရဟောင်း တွေရဲ့လေသံနဲ့ ဘာမှထူးခြားပြောင်းလဲ တာ မရှိပါဘူးလို့ ဆိုကြပါတယ်။ ဒါဟာ ပြည်သူ ပိုင်သိမ်းခြင်းတစ်ခုကိုသာ အကာအကွယ် ပေးထားပြီး တခြားနည်းနဲ့ မောင်ပိုင်စီးခံရမှာ၊ သို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက်သိမ်းယူချုပ်ကိုင်ခံရတာ မျိုးကနေ အကာအကွယ်မပေးထားပါဘူးတဲ့။ (အမယ် ဒီနိုင်ငံမှာ မွေးကတည်းကနေခဲ့ပြီး ကိုယ့်လယ်ကိုယ် လုပ်တဲ့သူတွေတောင် အ သိမ်းခံနေရတဲ့ဟာများ သူတို့က အကာ အ ကွယ် လိုချင်သေးသတဲ့။ အင်းလေ၊ ဒီလိုအ သိမ်းခံရနိုင်ဆိုလို့ကို ကြောက်ရတာပေါ့ဗျလို့ ပြန်ပြောမယ်ထင်တယ်နော်)။
နောက်ပြီးတော့ ကော်မရှင်ရဲ့ခွင့်ပြုချက် ဖြင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံ ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်း တစ်ခုကို ပါမစ်သက်တမ်း မကုန်ခင်အတွင်း ရပ်ဆိုင်းခြင်းမပြုရန် ပြည်ထောင်စုအစိုးရက အာမခံသည်ဆိုတဲ့ အကာအကွယ်ပေးချက် မျိုးတော့ ပါပါတယ်တဲ့။ ဒါပေမဲ့ လုံလောက် သော အကြောင်းပြချက်မရှိလျှင်ဆိုတာက နောက်ကကပ်ရက်ပါနေတယ်တဲ့။ ဟဲ၊ဟဲ။ ဧည့် သည်ကို ညကြီးမင်းကြီးအိမ်မှမောင်းမထုတ် ရ (မှတ်ချက်၊ အိမ်ရှင်က စိတ်ဆိုးစရာအကြောင်း မရှိလျှင်)ဆိုတာမျိုး ဖြစ်နေလား မသိဘူးနော်။
နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနဲ့ပတ်သက်ရင် ဆွေ မျိုးပေါက်ဖော်ကြီးကတော့ နာမည်အတော်ရ သဗျ။ သူ့ဆီမှာက နဂိုထဲက ပုဂ္ဂလိကထက် အစိုးရပိုင်လုပ်ငန်းတွေက များပေမယ့် ပြည် ပက ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူတွေကို မတရားနှိမ်ပေါက် နဲ့ ကိုယ်တွယ်ဆက်ဆံတယ်လို့ မကြားရပဲ ဧည့် သည်ကို မလာခင်မှာ ဘယ်လိုအကန့်အသတ် တွေရှိတယ်ဆိုတာ ညှိနှိုင်းပြီးတဲ့နောက် သ ဘောတူလုပ်ကိုင်ကြပြီဆိုရင်တော့ အရှိန်ရပြီး သား သူ့လုပ်ငန်းများနဲ့ တရားသဖြင့် ယှဉ် ပြိုင် ခွင့်ပေးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အပြန်အ လှန်အားဖြင့်လည်း သူက သူ့နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်း တွေကို ပြည်ပမှာ ရင်းနှီးမြုပ် နှံမှုတွေတောင် လုပ်နေတာလေ။
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ အများပြည်သူရဲ့ မေတ္တာပုံ အမ်ပီတီကလည်း အစိုးရကြီးက တင်ဒါခေါ်ယူရွေးချယ် ခွင့်ပြုထားတဲ့ အော်ရီ ဒူးတို့၊ တယ်လီနောတို့နဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ ဂျပန် ကုမ္ပဏီကြီးနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ ကေဒီဒီအိုင်တို့၊ ဆူမီ တိုမိုတို့ နဲ့ လက်တွဲလုပ်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဈေးကွက်ထဲမှာ ယှဉ်ပြိုင်ကြတဲ့အတွက် ပြည် သူတွေမှာ ရွေးချယ်စရာတွေ များပြီး ဝန် ဆောင်မှုတွေ ထိုက်ထိုက်တန်တန် ရကြမယ် ဆိုရင်တော့ အလွန်ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်ဖုန်းကတ်က ပြောမရတာပဲဖြစ်ဖြစ် နစ် နာသူက ကိုယ့်ပြည်သူပဲဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ တစ် ချက်ကိုတော့ မမေ့စေချင်ဘူး။ အပြင်ကဧည့် သည် ကတ်သစ် တွေပြောမရရင် မူလလက် ဟောင်း (ကွာရှင်းမရတဲ့ဟာကြီး)ကိုပဲ အားကိုး တကြီးပြန်သုံးကြမယ်လို့ ထင်ရင်တော့ မှန် ကန်တဲ့အတွေးဖြစ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပြည်သူ သုံးစွဲနေတဲ့ ဖုန်းကတ်များ အားလုံးအဆင်ပြေ စွာ သုံးစွဲနိုင်ကြတယ်ဆိုတာနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဆီ လာရင်းနှီးမြုပ်နှံသူတွေဆိုရင် ပြည်သူရော သူတို့ပါ အကျိူးရှိကြတယ်ဆိုမှ မင်္ဂလာသတင်း ဖြစ်မှာပါ။
နှစ်များစွာ တံခါးပိတ်ထားတဲ့ ကျွန်တော် တို့အိမ်ကြီးမှာ အပြန်အလှန် အကျိူးပြုလုပ် ကိုင်မယ့် ဧည့်ကောင်းတွေအတွက် တံခါးစ ဖွင့်လာပြီး ဧည့်သည်တချို့လည်း ဝင်လာ လုပ်ကိုင်နေပြီး အချို့လည်း ဝင်လာဖို့ ခြေ လှမ်းပြင် နေကြပါတယ်။ ရောက်စလူတွေကိုမှ ဧည့်မခံထားရင် အပေါက်ဝပြူနေတဲ့ နောက် ကျသူတွေက လှည့်ပြန်သွားမှာစိုးမိပါတယ်ဗျာ။
Ref:the ladies news journal
Posted by Ko Nge at Tuesday, October 14, 2014
မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၏ နိုင်ငံတကာသို့ သွားလာခွင်...
အိမ်ခြံမြေအခွန် ပြည်တွင်းအခွန်ဌာနရဲ့ သတ်မှတ်နှုန်း...
Singapore Scholarship လျှောက်ထားနိုင်ပြီ
ဆိပ်ကမ်းအရောက်ကားတန်ဖိုး (CIF) နှုန်းထားအသစ်များ!
သွင်းကုန် မြင့်တက်နေလို့လား ဒါမှမဟုတ် အိမ်ခြံမြေပြ...
Sim Lim Square က ဈေးပေါတာဆိုပြီး ပစ္စည်းလေးတွေဝာ်...
2014 Comparison Between Yangon & Singapore!
သီလဝါအထူး စီးပွားရေးဇုန် မြေ တစ်စတုရန်းပေလျှင် အမေ...
နေအိမ်ငှားရမ်းခ ကျပ်နှစ်သိန်းခန့်ရရှိသည့် အိမ်ပိုင...
လက်ရှိမိမိရဲ့ကွန်ပျူတာနှင့် iphoneက Data တွေကို B...
စားသောက်ဆိုင်များ စားသုံးသူထံ အခွန်ကောက်လျှင် တံဆိ...
ခရိုနီအကျိုးစီးပွားကိုပဲ ကာကွယ်နေတဲ့ ဥပဒေတွေ ဖြစ်ေ...
MAC က Developer Center လေးပါ
ttkeyboard for iOS 8 (Free)
အမေရိကန်ကုမ္ပဏီများ မြန်မာတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်...
့မြန်မာပြည် စီးပွားရေး ဝိရောဓိများ
အမိမြေမှာ ဘာတွေဖြစ်နေလဲ? ဖြစ်ရပ်မှန်လေးတွေပါ....
ရောက်စလူမှ ဧည့်ခံမထားလျှင် နောက်ကျသူက လှည့်ပြန်သွာ...
စင်ကာပူ ပီအာရရှိထားသည့် မြန်မာအမျိုးသမီးအိမ်ရှင်တစ...
မြန်မာပြည်မှာ Economics ဘာသာရပ်ကို ဘာလို့ သင်ရခက်ေ...
တရုတ်၊ ဂျပန်၊ စင်ကာပူနှင့် နယူးယောက်အလွန်တွင် ရန်က...
စင်ကာပူမှာ အလုပ် (သို့) အလုပ်အသစ် ဘယ်လို ရှာကြမလဲ ...
စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် ငွေကြေးခ၀ါမှုဥပဒေအား ထပ်မံ တင်ြး...
ယခုဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း မြေဈေး...
ဆုံးရှုံးစရာ ဘာမျှမရှိသော ဟောင်ကောင် ကျောင်းသားလှုပ်...
မြန်မာ့ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အမေရိက...
Share Files from Mac OS X to Windows PC’s Easily!
How to Transfer Files from PC to Mac
Migrate your files fromaMac toaPC!
စကာင်္ပူ PR လျှောက်ကြည့်ရအောင်!
့မြန်မာပြည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားများ ပြည့်မီရန် ဘယ်လု...
နိုင်ငံခြားဘဏ် ၉ခု မြန်မာပြည်မှာ လုပ်ခွင့် ဗဟိုဘဏ်...
ပြည်တွင်းရောက်နေပြီဖြစ်သည့် MLM ဆင့်ပွားလူလိမ်ဂိုဏ...